Momba anay - Shandong GOJON Precision Tech. Co., Ltd.
Shandong GOJON Precision Tech. Co., Ltd. izay miorina ao amin'ny Distrikan'ny fampandrosoana teknolojia avo lenta, tanànan'ny Qingdao, Sina, dia mankafy fitaterana mety sy mandroso ary tombony manokana ara-jeografika natolotry ny natiora.
Amin'ny maha-mpanamboatra matihanina amin'ny mpampita orinasa iray manontolo, tsipika Smart Laminating Single Facer, rafitra fitantanana famokarana ary boaty fanaovana boaty sns, GOJON dia nanomboka ny taona 2008, ary nanjary orinasa teknolojia avo lenta ary laharana voalohany amin'ny fahaizan'ny R&D eo amin'ireo milina famonosana indostria eto an-toerana sy any ivelany. GOJON dia mampifangaro ny R & D, ny orinasa mpamokatra entana, ny varotra ary ny serivisy aorinan'ny varotra, ny fomba fitantanana maoderina sy ny fomba fiasa mba hanomezana vokatra azo antoka sy marin-toerana, vahaolana feno fonosana feno ary kojakoja mifandraika amin'izany. GOJON dia manolo-tena hanome vahaolana turnkey miaraka amin'ny vokatra ambony sy serivisy tonga lafatra ho an'ny orinasa bebe kokoa hamoronana lanja sy tombony.
Mihoatra ny 10 taona ny traikefa, GOJON dia nametraka fifandraisana tsara sy marin-toerana amin'ireo andrim-pikarohana siantifika sy oniversite oniversite ary miezaka hatrany hanatsara ny fahombiazan'ny vokatra ary hanatsara ny firafitry ny vokatra hahatsapa vokatra azo antoka sy manan-tsaina indrindra.
Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra tena tsara, tambajotra marketing tonga lafatra ary tsara alohan'ny serivisy fivarotana, serivisy fivarotana ary serivisy aorian'ny varotra, amidy amina firenena maro toy ny Alemana, Italia, Espana, Gresy, Russia, Belarus Japan, Thailand ary India sns ary nahazo fiderana avo an'ny mpanjifa.
GOJON mino fa ny Passion dia mahatratra ny nofy ary mamorona fahagagana ny nofinofy, ary hifikitra hatrany amin'ny orinasa sprite hoe "Omeo ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra amin'ny vidiny mirary". Manantena ny hitombo miaraka amin'ny mpanjifa ny orinasa, ary hamorona fandresena, manantena tokoa fa hanana fotoana hiaraha-miasa maharitra amin'ny ho avy.
Rafitra Conveyor an'ny orinasa iray manontolo
Lakaoly & fampirimana mandeha ho azy, milina Stitch
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny fiara sy ny milina fanontana kaody QR
Fitaovana boaty boaty fanampiny fanampiana
Ny finiavana sy ny fahitana
Manasa anao hiditra amin'ny orinasa manan-tsaina.
Omeo ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra amin'ny vidiny mirary.
Niorina tamin'ny taona 2008, traikefa 13 taona, lanja fanondranana 2 tapitrisa dolara isan-taona, ny firenena fanondranana lehibe indrindra, Alemana, Italia, Espana, Gresy, Russia, Belarus, Thailand, India ary ireo firenena sy faritra hafa mihoatra ny 10.
Carte Conveyor, Masinina maranitra ho an'ny fonosana taratasy, Roller Conveyor Systems, A3 Taratasy fampirimana, Efijery fiasan'ny atrikasa, Erp Banking,